Mucaaradka Sudan oo soo dhoweeyey talaabada xukuumadda Khartoum ay ku sii daysay xubno kamid ah mucaaradka – SBC
Mucaaradka Sudan oo soo dhoweeyey talaabada xukuumadda Khartoum ay ku sii daysay xubno kamid ah mucaaradka
Khartoum:-Xisbiga Golaha shacbiga Mucaaradka ah ee dalka Sudan oo uu hoggaamiyo Dr :Xasan Al-turabi ayaa sheegay in xukuumadda Sudan ay sii deysay 9 kamid ah xubnaha xisbigaas oo xirnaa tan iyo bishii January ee sanadkan.
Xog-haya arimaha siyaasadda ee Golaha shacbiga Abuubakar C/raaziq ayaa u sheegay Aljazeera in ciidamada dowladda Sudan ay sii deysay 9 kaas qof oo xirnaa bilooyin badan, oo xisbiga haya talada Sudan u xiray iyadoo aanay jirin sabab lagu qanci karo.
Abuubakar C/raaziq ayaa intaasi ku daray in xizbigiisu aanan wax wada hadal ah la sameyn doonin xisbiga haya talada dalka Sudan ee lagu magacaabo xisbul Mu´tamar Alwadani.
Dr xasan Al-turabi oo Isniintii lasoo dhaafay xabsiga laga siidaayay kadib markii uu xirnaa 3 bil ayaa tilmaamay in ay doonayaan isbedel siyaasadeed oo ka dhaca dalka sudan.
Ciidamada ammaanka ee dalka Sudan ayaa xiray Dr:Xasan Al-turabi iyo 8 kale oo ka tirsan mas´uuliyiinta xisbigiisa 18-kii January ee sanakan kadib markii ay ugu baaqeen shacabka in ay sameeyaan dibad bax looga soo horjeedo xukuumadda Albashiir.
SBC International Monitorinal